युक्रेनको राजधानीमा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार, राष्ट्रपतिको अबस्था के छ ? — Imandarmedia.com
बीबीसी। रूसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा रुसी सेनाले चार करोड जनसङ्ख्या भएको युक्रेनमा विभिन्न दिशाबाट ठूलो आक्रमण गरिरहेको छ।
रुसी फौज किएभनजिकै आइपुग्दा युक्रेनले प्रतिरोध गरिरहेको जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनबाट उनलाई उद्धार गर्ने वाशिङ्टनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
“लडाइँ यहाँ भइरहेको छ। मलाई हतियार चाहिएको छ, कुनै सवारी होइन,” अमेरिकी समाचार संस्था एपीले वार्तालापबारे जानकारी भएका एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारीलाई इङ्गित गर्दै जेलेन्स्कीले त्यसो भनेको जनाएको छ।
द वाशिङ्टन पोस्टले पनि अमेरिकी र युक्रेनी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सरकार जेलेन्स्कीलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। रुसी हमलाविरुद्ध जनाएको प्रतिक्रियाका कारण जेलेन्स्कीको समाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहेको छ।
विगतमा हास्यव्यङ्ग्यकार तथा अभिनेता रहेका उनले निरन्तर लडिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एउटा सम्बोधनमा उनले भनेका छन्, “जब तिमीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्छौँ हामी त्यसको सामना गर्छौँ, भाग्दैनौँ”
उनले आफैँले खिचेको एउटा भिडिओ पनि पोस्ट गरेका छन् जसमा उनी र उनका सहयोगीहरू किएभमा देखिन्छन्। उनले भनेका छन्, “हामी सबै यहाँ छौँ र यो यस्तै भइरहन्छ।
यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राति आफूलाई पक्राउ गरेर आफ्नो पक्षका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने रुसी योजना युक्रेनी सुरक्षा बलले विफल बनाइदिएको बताएका छन्।
भिडिओ सन्देशमा उनले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि आफ्ना राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि दबाव सिर्जना गर्न रुसी जनतालाई आग्रह गरेका छन्। हामीले योजना असफल बनाएका छौँ,” जेलेन्स्कीले भने।
युक्रेनी सेनाले किएभ र वरपरका सहरहरू आफ्नो नियन्त्रणमै राखेको उनले बताएका छन्। आफ्नो देशसँग युरोपेली सङ्घको सदस्य हुने अधिकार समेत रहेको उनको भनाइ छ।
अझैसम्म युरोपेली सङ्घको सदस्य नरहेको युक्रेनको संविधानमा युरोपेली समूहमा सहभागिता जनाउने आकाङ्क्षा व्यक्त गरिएको छ। तेस्तै,युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले शनिबार फेरि नयाँ भिडियो सन्देश जारी गरेका छन।
यो भिडियोमा उनले आफ्नो सेनाले रुसको त्यो योजना विफल पारेको दावी गरेका छन् जुन योजना अनुसार रुसले गत राती उनलाई समातेर उनको ठाउँमा आफ्नो नेतालाई स्थापित गराउन चाहन्थ्यो।
भिडियो सन्देशमा जेलेन्स्कीले भने ‘हामीले उनीहरुको योजना बेकार गरिदियौं। उनले युक्रेनको सेनाको राजधानी किभ र आसपासका क्षेत्रमा पूरा नियन्त्रण रहेको बताए। उनले युक्रेनका हरेक सहरमा रुसी सैनिकलाई कडा टक्कर दिइएको बताए।
साथमा उनले रुसी जनतासँग आफ्ना राष्ट्रपतिमाथि यो आक्रमण बन्द गर्न दबाब बढाउन आग्रह पनि गरे। उनले आफ्नो भाषणको केही भाग रुसी भागमा गरे र भने हजारौं पीडितहरु, सयौं बन्दीहरुले बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि उनीहरुलाई युक्रेन किन पठाइयो।
उनीहरुलाई यहाँ मर्न र अरुलाई मार्नको लागि पठाइयो। तपाइन् जति छिटो आफ्नो सरकारलाई यो लडाइँ बन्द गर्न भन्नुहुन्छ तपाइँका त्यति नै मानिसहरु जीवित रहन सक्नेछन् ।’जेलेन्स्कीले यसअघि किभका सडकमा हिँड्दै बनाइएको एउटा भिडियो पोस्ट गरेका थिए।
भिडियोमा उनले आफूले आफ्नो सेनालाई रुसको अगाडि आत्ममिर्पण गर्न आदेश दिएको भन्दै सामाजिक संजालमा फैलाइएको दावी गलत भएको बताएका थिए । त्यो भिडियोमा उनले भनेका थिए ‘म यहीँ छु। हामी आत्मसमर्पण गर्ने छैनौं। हामी आफ्नो देशको रक्षा गर्नेछौं।
युक्रेनको राजधानी किभ र खारकिभ सहरसहित अलग अलग क्षेत्रमा विष्फोट भएका छन् । विष्फोटको यो सिलसिला त्यतिबेला सुरु भएको थियो जब रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाहीको घोषणा गरे।
यसैबीच युक्रेनकी एक महिलाले रुसी सैनिकले उनलाई टिन्डरमा फ्लर्टी म्यासेज पठाइरहेको दावी गरेकी छिन् ।रुसी सेना युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खारकिभबाट २० माइल दूरीमा छ। युक्रेन र रुसबीच युद्धको अवस्था छ।
यही बीचमा युक्रेनकी यी महिलाले स्क्रिनसट शेयर गर्दै रुसी सैनिकले आफूलाई सामाजिक संजालमा फ्लर्ट गर्ने उद्देश्यले म्यासेज पठाइरहेको दावी गरेकी छिन् । कैयौं सैनिकहरुले आफ्नो पदको जानकारी पनि तस्वीरका साथ महिलाहरुलाई पठाएका छन् ।
द सनको रिपोर्टअनुसार आन्द्रेइ, अलेक्जेण्डर, ग्रेगरी र माइकलसहित दर्जनौं रुसी सैनिकहरुले युक्रेनका महिलाहरुलाई आकर्षित गर्नको लागि आफ्नो प्रोफाइल डेटिङ एपमा बनाएका छन्।
दाशा सिनेल्निकोभा नामकी एक महिलाले विगत केही दिनदेखि टिण्डरमा कैयौं रुसी सैनिकले आफूलाई म्यासेज र रिक्वेस्ट पठाइरहेको बताइन्। ३३ वर्षकी दाशाले द सनसँग भनिन् ‘म युक्रेनको किभमा बस्छु।
एक जना साथीले मलाई टिण्डरमा धेरै रुसी सैनिक आएको बताएपछि मैले आफ्नो लोकेसन सेटिङ खारकिभमा बदलिदिएँ । त्यहाँ पनि मलाई रुसी सैनिकको म्यासेज आउन थाले ।’दाशाले ३१ वर्षका कथित रुसी सैनिक आन्द्रेइसँग म्यासेजमा कुरा पनि गरिन्।
उनले आन्द्रेइसँग किमी कहाँ छौं ? के तिमी खारकिभमा छौं ? भनेर सोधिन् । जवाफमा आन्द्रेइले आफू खारकिभमा नभएको तर ८० किलोमिटर दूरीमा भएको बताए। दाशाले आफूसँग भेट्ने कुनै योजना छ ? भनेर सोध्दा आन्द्रेइले खुसीसाथ आउने बताए।
टिण्डरमा आउने म्यासेजलाई युक्रेनी महिलाहरुले रुसी सैनिकको म्यासेज बताएका छन्। कैयौं प्रोफाइलमा रुसी सेनाको युनिफर्म लगाएका मानिसहरु छन्। महिलाहरुले यसको स्क्रिनशट पनि शेयर गरेका छन्।